Fadeeexad: DF oo billowday inay ajaaniibta ka iibiso baasaboorka - Caasimada Online
Home Warar Fadeeexad: DF oo billowday inay ajaaniibta ka iibiso baasaboorka
Fadeeexad: DF oo billowday inay ajaaniibta ka iibiso baasaboorka
Muqdisho (Caasimada Online) – Warbixin kooban oo lagu qoray website kasoo baxa dalka Beljium oo lagu magacaabo Felmish Newspaper, ayaa sheegay in Safaarada Somalia ee dalka Beljium-ka ay bixisay Baasabooro aan sharciga loo marin.
Qoraalka lagu soo daabacay warbaahintaasi ayaa waxaa lagu sheegay in Baasabooradaasi ay Safaarada siisay Ajaanib aan asal ahaantooda xiriir la laheyn Somali, kuwaasi oo Baasaboorada loo siiyay qaab qarsoodi ah.
Ajaanibta loo sameeyay Baasaboorada ayaa waxaa la sheegay inay ahaayen qaxooti doonaayay inay kusii safraan misna ku meel-maraan Baasaboorka Somalia, kuwaasi oo dhaqaale culus siiyay xubno ka howlgala Safaarada oo aan magacyadooda la shaacin.
Qaxootiga ajaanibta ah ee laga iibshay Baasaboorka ayaa la sheegay inaysan wadan Baasabooro kale, balse ay ahaayen kuwo doonaayay in dhalashada Somalia ay u adeegsadaan ku galida dalalka kale ee Yurubta.
Sidoo kale, Qoraal kooban oo kasoo baxay Safaarada Soomaalida ee Beljium-ka ayaa waxaa lagu beeniyay warbixinta lagu daabacay webka lagu magacaabo Felmish Newspaper ee laga leeyahay dalkaasi.
Safaaradu waxa ay sheegtay in warbixintaasi aysan sal iyo baar ku laheyn xaqiiqda jirta waxaana sidoo kale lagu cadeeyay inaanu jirin Baasaboor laga bixiyay Safaarada.
Si kastaba ha ahaatee, eeda loo jeediyay Safaarada Somalia ee dalka Beljium-ka ayaa waxa ay barbar soctaa eedeymo ceynkaasi ah oo loo jeediyay tobaneeyo Safaaradood oo iyagu ku shaqeysta musuq noocaasi ah.